Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2018 - Wikipedia
I Jesosy na Jesoa dia Jiosy tany Palestina izay inoan'ny Kristiana ho zanak'Andriamanitra nirahina ho ety ambonin'ny tany hanavotra ny olombelona tamin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho velona indray. Izy no foto-pisian'ny Fivavahana kristiana. Antsoina koa hoe Jesoa Kristy na Jesosy Kristy izy.
Ny anarana hoe Jesoa dia hita ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy fa ny Jesosy kosa ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy. Ny hoe Jesosy dia fanagasiana ny teny anglisy hoe Jesus izay avy amin'ny teny latina hoe Iesus izay avy ain'ny teny grika hoe Ἰησοῦς / Iêsoûs izay avy amin'ny teny hebreo hoe Yeshua. Ny hoe Jesoa kosa dia fanagasiana avy hatrany io teny hebreo io.
Ny anarana hebreo lava hoe Yehoshua no ampiasaina amin'ny endrika fohy hoe Yeshua. Izany teny izany dia ahitana ny hoe Yeho na Yeh izay fanovan'ny hoe Yaho na Yah (sahala amin'izay hita ao amin'ny hoe Halelu Yah) izay fanafohezana ilay anaran'Andriamanitra hoe Yahweh. Ny hoe Yehoshua izany dia azo adika hoe "Mpamonjy i Yahweh" na "Yahweh dia famonjena". Mitovy fototra sy dika ny hoe Jesoa sy Josoa izay samy avy amin'ny teny hoe Yeshua.
Mba hiavahany amin'ireo Jesoa, Jesosy na Josoa hafa dia matetika asiana fanampiny io anarana io ka manome ny hoe Jesoa Kristy (Jesosy Kristy), Kristy Jesoa (Kristy Jesosy) na Jesoa avy any Nazareta (Jesosy avy any Nazareta). I Nazareta no tanàna niaviany. Antsoina fotsiny amin'ny hoe Kristy koa izy. Ny hoe Mesia dia iantsoana azy ihany koa nefa tsy matetika izany na dia mitovy hevitra amin'ny hoe Kristy. Ny hoe Kristy dia avy amin'ny teny grika hoe Χριστός / Khristos izay fandikana ny teny hebreo hoe Meshiakh na Mashiakh izay midika hoe "voahosotra", izany hoe voahosotr'Andriamanitra hanafaka ny Israely voalaza mialoha ao amin'ny Baiboly hebreo. Mety hialohavan'ny teny hoe Tompo ihany koa io anarana io ka ahazoana ny hoe Tompo Jesoa na Tompo Jesosy izay hafohezina indraindray amin'ny hoe Tompo. (tohiny...)
Ny Andriandoriamanjaka dia taranaka iray eto Imerina no niandohany.
Rabiby (fiandohan'ny taonjato faha-16 taorian'i Kristy), mpanjaka arabo jiosy teo Ambohidrabiby dia nanan-janaka telo ka ny vavimatoa dia i Rabefaravolamanjaka ary ny vavy aivo dia i Ramaintsoanala (niova anarana ho Randapavola). Nisy vady namboarina roa teo Ambohidrabiby tamin'ny nanjakan-dRabiby. Raha tonga hangataka an-dRabefaravolamanjaka Andriamanelo mpanjakan'Alasora dia i Randapavola no nomen-dRabiby ho vadiny fa Rabefaravolamanjaka kosa nomeny ho vadin'Andrianamboninolona, zanak'Andriamananitany. Ny Andriandoriamanjaka dia iantsoana ireo zana-dRabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona zanak'Andriamananitany. Ao antampon'ilay tendrombohitra avo voahodidina hadivory eroa ampita avaratra antsinanan'Ambohidrabiby, atao hoe "Ambohitrandriananahary", no namponenan-dRabiby i Rabefaravolamanjaka sy ireo zanany ary ao Rabefaravolamanjaka no miafina. (tohiny...)
I Jordana dia ony ao Atsianana Afovoany mirefy 360 km izay mipoitra avy ao amin’ny tendrombohitra Anti-Libanona sady avy avaratra mianatsimo ka mivarina any amin’i Ranomasina Maty. Mandavan-taona ny fikorianany no tsy miova firy koa ny habetsahan’ny rano entiny (salany : 32 m3/s) noho ny fisian’ny rano madinika mamatsy azy, dia i Iarmoka, izay mipoitra avy anaty vato sokay sy avy amina ranomandry. Ny lohasahany no iva indrindra eran-tany satria mahatakatra any amin’ny 421 m ambanin’ny ranomasina.
Tao amin'ny ony Jordana no nanaovan’i Joany batemy (na batisa) an’i Jesoa, araka ny voasoratra ao amin’ny Evanjely ao amin’ny Baiboly ary mbola misy toerana izay namboarina ao amin’ny fialan’i Jordana ny farihy Tiberiasy (na Tiberiada na Galilia) hanaovana batisa ireo Kristiana mpanao fivahiniana masina. (tohiny...)
Ny raki-pahalalana (izay manana tsipelina maro) dia boky firaketana ny fampahalalana mikasika ny fahaizan'ny olombelona. Ilay raki-pahalalana ankehitriny dia na vita taratasy (toy ny Rakibolana Rakipahalalana) na eo amin'ny Aterineto (toy i Wikipedia) izay mirakitra lahatsoratra maro amin'ny taranja iray ho an'ireo raki-pahalalana manokana, na amin'ny taranja rehetra ho an'ireo raki-pahalanana tsotra.
Roa arivo taona izay no nisian'ny rakipahalalana voalohany ; ny rakipahalalana voalohany, Tantara Voajanahary ("Hisoire Naturelle" amin'ny teny frantsay), dia nosoratan'i Pliniosy Be Taona tamin'ny 77 CE tany ho any. Ny raki-pahalalana araka ny amantaratsika azy amin'izao fotoana izao, dia nipoitra tamin'ny taonjato faha 17. Tafiditra anaty boky iray ny raki-pahalalana, kanefa ny raki-pahalalana sasany, toa ny Encyclopaedia Britannica amin'ny fiteny anglisy, na ny Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana amin'ny fiteny espaniola, dia raki-pahalalana misy "volume" amam-polony (32 ho an'ilay voalohany, 70 ho an'ilay faharoa). Ankehitriny, misy raki-pahalalana elektrônika (antranonkala na ambon'ny CD), toa i Wikipedia (manana sampanana amin'ny fiteny mahery ny 250), na Citizendium. (tohiny...)
Ny vazimba dia anarana niantsoana ireo mponina nonina taty anivon'i madagasikara ( taty Imerina sy Betsileo, bara, anjozorobe) talohan'ny nanjakan'i Rabiby sy Andriamanelo (taonjato faha-16 ap JC). Rabiby, mpanjaka arabo, sy Andriamanelo, mpanjaka maley mantsy no navahan'ny lovantsofina fa arabo sy maley ary ireo olomainty mpanompony no angaralahy,fa ireo sisa efa nonina taty anivontany tamin'izany dia vazimba. Ary i Rabiby no nanenjika voalohany ny vazimba sy nanosika azy handositra.
Araka ny tantara,ireo mpitondra fanjakana maley sy arabo tonga taty anivon'i Madagasikara ( taty Imerina sy Ibetsileo) nanomboka ny taonjato faha-15 no nampiasa voalohany ny teny hoe " vazimba" mba hiantsoany ireo mponina efa tompontany taty anivon'ny riaka tamin'ny fahatongavany teto. Ohatra amin'izany, i Andriamanelo dia voalazan'ny lovantsofina fa maley, anefa i Rangita sy Rafohy izay renibeny dia voalazan'ny lovantsofina fa vazimba. Toy izany koa, i Rabiby arabo raha nandao an'Ambohitsitakatra Anjozorobe, dia tonga teo Ankotrokotroka ( tato aoriana lasa Ambohidrabiby), ka nandroaka ireo mponina teo izay vazimba no nahafantarany azy .
Arak'izany, ny vazimba dia tsy teny hiantsoana firazanan'olona na fanahin'ny maty akory (araka ny filazan'ny sasany hoe rehefa maty ny olona sasany dia lasa vazimba) fa anarana iantsoan'ireo mpanjaka arabo sy maley ireo tompontany taty anivon'ny nosy raha tonga taty anivontany ireo arabo sy maley ireo tamin'ny taonjato faha-16 tao aorian'ny jesosy kristy.
Manaporofo fa tena olona tokoa ireny vazimba ireny dia i Rapeto sy Rasoalao dia vazimba.Ary indrindra, ireo antehiroka dia vazimba avokoa.
Arak'izany, ny teny hoe " vazimba" dia saika nampiasaina manerana ny faritra anivon'ny madagasikara ary amin'ny sisintany andrefan'ny madagasikara satria ireo maley sy arabo sendra azy ireo dia saika nampiasa io anarana io avokoa hiantsoana ireo mponina efa teo izay sendra azy. (tohiny...)
Ny Tantara voajanahary izay natonta tamin'ny taonjato faha-17
Ny Naturalis Historia, izay azontsika dikaina hoe Tantara Voajanahary amin'ny fiteny malagasy dia asa soratra izay mirakitra anaty volume 37 nosoratan'i Pliniosy Ilaibe, izay tia nanangona fampahalalana betsaka indrindra mahakasika ny kolontsaina amin'ny ankapoben'ny olom-pirenena romana izay manan-kolontsaina.
Nahatsiaro saina i Pliniosy fa fohy ny fe-potoana iainan'ny olombelona, ary noho izany tokony ampiasainy tsara izay fe-potoana ananany izay mba tsy hahakely ny fahafahany mianatra.
Na dia anisan'ny asa soratra feno indrindra avy amin'ny Taona latina Taloha aza io zavatra io, tsy hita ny firaketana ambon'ny papyru, fa singantsingan-taratasy mateza nosoratana nandritra ny taonjato fahadimy ary singan-taratasy tamin'ny taonjato fahavalo. Ilaina niandry ny taonjato faha roa ambin'ny folo isika vao afaka mijery ny versiona tanteraka ary ny fanontana nataon'i Nicolas Jenson ny taona 1469, izay tsy dia nisy nahalala. Nanonta azy fanindroany i Sweynheym ary Pannartz tamin'ny 1470 avy amin'ny fanontan'i Giovanni Andrea Bussi, evekan'i Aleria. Ekena fa toerana nitombohan'ny fomba ara-tsoratra nentindrazana ilay santiôna farany teo. (tohiny...)
Léonard de Vinci (15 Aprily 1452 - 2 Mey 1519) dia lehilahy italianina iray izay niaina tamin'ny andron'ny Renaissance. Tsara izy amin'ny zavatra maro, fa dia malaza tahaka ny mpanao hoso-doko. Izy koa dia mpahay siansa, mpahay matematika, injeniera, mpamoron-javatra, mpahay endri-batana, sokitra, mpanao mari-trano, bôtanista, mpahay mozika sy ny mpanoratra. Mahaliana ny zava-drehetra eo amin'ny natiora I Léonard de Vinci. Tiany ho fantatra ny fomba niasa ny zava-drehetra. Izy dia mahay mianatra, mamorona sy manao isan-karazany ny zava-mahaliana.
Maro ny olona mihevitra fa Léonard de Vinci dia iray amin'ireo mpanao sary hosodoko lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra. Ny olona hafa mihevitra fa izy no olona manan-talenta indrindra hatramin'izay mba efa niaina. Ny mpahay tantaran-javakanto Helen Gardner dia nilaza fa tsy nisy olona toa saika tahaka azy satria liana amin'ny zavatra maro izay toa nanana ny saina ny iray goavam-be, nefa ny zavatra toy tahaka ny olona dia mbola zava-miafina. (tohiny...)
Ny tolom-bahoaka tamin'ny 1947 dia fikomiana malagasy nitranga tamin’ny taona 1947 sy 1948 teto Madagasikara, tamin’ny fotoana naha zanatany frantsay azy. Taorian’ny kirizy tany Indosinoa izay nipoaka tamin’ny 1946, dia heverina ho fambaran’ny fanafoanana ny fanjanahantany tany Afrika miteny frantsay izany. Ny fikomiana, izay naharinganana voanjo frantsay andaniny sy Malagasy tsy isan’ny mpitaky fahaleovantena ankilany, dia narahana famaizana mahatsiravina nataon’ny tafika frantsay izay namono Malagasy an’arivony maro. Mbola miady hevitra ireo mpahay tantara ny amin'ny tena isan'ny niharan’ny famaizana, ka eo anelanelan’ny 11 000 sy 100 000 ny isan’ny maty ary izany no iheverana ny zava-nitranga ho ny tena mahatsiravina indrindra teo amin’ny tantaran’ny fanjanahan-tany frantsay. Tsarovan’ny Malagasy amin’ny alalan’ny andro tsy fiasana isaky ny 29 Marsa izany fikomiana izany nanomboka tamin’ny taona 1967. (tohiny...)
An'aliny no isan'ny sinôgrama, na dia fiovana madinika ny sinôgrama hita ao amin'ny andinin-teny taloha aza ny ankamaroan'izy ireo. Ny fanadihadiana tao Sina dia maneho fa ny fahaiza-mampiasa ny soratra sinoa dia mila ny fahafantarana sinôgrama telo hatramin'ny efatra arivo. Ao Japana dia 2.136 no isan'ireo kanji (anaran'ny sinôgrama amin'ny teny japoney) ianarana any am-pianarana. Kanji maro noho izany anefa no tena fampiasa amin'ny fiainana mandavanandro. Maro ireo lisitra sinôgrama tokony fantatry ny tsirairay, ary samy manana ny azy ny firenena mampiasa ny soratra sinoa ; ny soratra nentindrazana dia mbola ampiasaina ao Taiwan, Hong Kong, Macao ary Korea Atsimo. I Japana dia manana ny fombany manokana hanatsorana ny sinôgrama, izay mbola akaiky amin'ny soratra sinoa nentindrazana noho ny soratra sinoa notsorina izay fampiasa ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina. Na dia misy aza ny fanatsorarana ataon'ny japoney (izay antsoina hoe shinjitai), ireo soratra tsy fahita matetika dia soratana amin'ny fomba nentindrazana ihany (kyūjitai), izay mitovy tsy misy valaka amin'ny soratra nentindrazana. Ao Korea Atsimo dia mampianatra ny soratra sinoa amin'ny ambaratongam-pianarana voalohany hatramin'ny faran'ny ambaratonga faharoa na dia tsy fampiasa isan'andro toa ny any Japana sy ny firenena hafa ao amin'ny sinôsfera aza izy ireo. Eo amin'ny 1.800 eo ho eo no isan'ny soratra sinoa ampianarina eny am-pianarana. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2018&oldid=798601"
Dernière modification le 4 Aprily 2017, à 21:50
Voaova farany tamin'ny 4 Aprily 2017 amin'ny 21:50 ity pejy ity.